I-Villa ka-Darvin (i-Ciada Private Resort & Imperilion) - I-Airbnb
I-Villa ka-Darvin (i-Ciada Private Resort & Imperilion)
Bustos, Central Luzon, i-Philippines
I-i-villa ephelele ibungazwe ngu-Darvin
U-Darvin Ungumbungazi ovelele
kuka-11am Umkhawulo we-20 pax
Jabulela ubuhle besimanje bale villa esanda kwakhiwa! Itholakala emizuzwini engu-40 kuphela ukusuka e-Metro Manila, le ndlu enhle eyihektare eyi-1 ilungele imindeni namaqembu amakhulu afuna ukushaywa wumoya nokungcola kwedolobha ngaphandle kwesikhathi eside sokuhamba!
Ngena echibini lethu lokubhukuda eliphelele nge-jacuzzi & kiddie pool futhi ujabulele eminye imisebenzi efana ne-karaoke, ama-darts, umzila wamabhayisikili nokunye okuningi, konke ngenkathi uhamba emaphandleni amasha!
- Ngenxa yobhubhane, sithathe izinyathelo ezengeziwe zokuphepha ukwenza indlu yethu iphephe. Ngaphandle kokuthintana okuncane ngokomzimba, sisebenzisa ukuhlanza okuthuthukisiwe nokubulala amagciwane kuyo yonke i-villa ngaphambi nangemva kwesivakashi ngasinye. Ngokuhambisana nemikhawulo kahulumeni, sicela izivakashi ukuthi zilandele ngokuqinile umkhawulo omkhulu wezikhathi zokungena nezikhathi ezibekiwe.
kuka-2pm Phuma ngaphambi
kuka-11am Umthamo omkhulu we-pax yabantu abadala abangu-20, izingane ezingaphansi kweminyaka engu-12 ubudala zikhululekile futhi azifakwanga ku-headcount. I-Aditonal 500 Pesos ngekhanda ngaphezu kuka-20 pax. ( Izivakashi /Izivakashi ezingabhukhwa ubusuku obubodwa zifakiwe ku-headcount)
Singahlinzeka ngokungena masinya noma ukuphuma kwephuzile uma kungekho ukubhukha okuxhunywe ezinsukwini ozithandayo. Uma ukuphuma sekwephuzile kungenzeka, sikhokhisa i-1000 Pesos ngehora ngokwandisa odlule ngo-11 ekuseni.
I-Ciada iyindlu ene-15,000 sqm. endaweni yasemaphandleni ezungezwe amapulazi, nemigwaqo eholela kule ndlu engakahlatshwa futhi engadalulwanga. Nakuba itholakala endaweni yasemaphandleni, i-Ciada ihamba ngemizuzu engu-5 nje kuphela kude neDolobha Elifanele lapho ungathola khona imifino eminingi, inyama, kanye nabathengisi bokudla kwasolwandle, izitolo zokudla, izitolo ezilula, nokunye okuningi! Kukhona futhi SM Mall futhi Waltermart esitolo itholakala kuphela 15 imizuzu drive away lapho ungathola Ukukhetha enkulu zokudlela international kanye nezimpahla zokudla!
Izivakashi ezibhukha le ndlu zingaletha, zipheke, futhi zilungiselele ukudla kwazo zisebenzisa ikhishi lethu elinakho konke noma zibe nokudla okusekelwa yinkampani yethu yokupheka esibambisene nayo! Ukuze ukupheka ngaphandle nabasebenzi benkonzo, sikhokhisa i-corkage engu-100 Pesos ngekhanda ngalinye.
Uma unanoma yimiphi imibuzo, sicela ukhululeke ukubuza! Sethemba ukukuhlalisa maduzane!
1 umbhede omkhulu, omatilasi abangu- 5
Njengoba indawo isemaphandleni futhi ingafakwanga, i-Waze nezinye izinhlelo zokusebenza ze-GPS azisebenzi. Izivakashi KUFANELE ZISEBENZISE I-GOOGLE MAPS ukuze ziye endlini nasemaphandleni.
Izivakashi kuzodingeka zihambe emgwaqweni ongabhukhiwe ongu-200 ukuze zingene endlini. Ngitusa ukusebenzisa isithuthi esiphakathi noma imoto enkulu ohambweni lwakho. ( Kungenzeka kungabi umqondo omuhle ukuletha i-Lamborghini yakho)
Njengoba njengamanje senza ukuthintana okuncane ngokomzimba nezivakashi, izisebenzi zethu zizokuthola kuphela lapho zingena futhi ziphuma ngaphandle uma ziceliwe. Sinikeza izivakashi umsakazo ukuze zifinyelele abanakekeli bethu nganoma yiluphi usizo ongaludinga!
Kungenzeka ngingekho lapho mathupha phakathi nokuhlala kwakho kodwa abanakekeli bethu bahlala esayithini futhi bayatholakala kusukela ngo-8 ekuseni kuya ku-11pm ukukusiza nganoma yini ongayidinga ngesikhathi sakho e-Ciada!
Njengoba njengamanje senza ukuthintana okuncane ngokomzimba nezivakashi, izisebenzi zethu zizokuthola kuphela lapho zingena futhi ziphuma ngaphandle uma ziceliwe. Sinikeza izivakas…
UDarvin Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Bustos namaphethelo